नेपाल आज | डेंगुले दुःख दिन्छ, ज्यान लिंदैन, डराउनु पर्दैन ( भिडियोसहित)
Breaking News कभर स्टोरी स्वास्थ्य
डेंगुले दुःख दिन्छ, ज्यान लिंदैन, डराउनु पर्दैन ( भिडियोसहित)
अहिले राजधानी काठमाडौंसहित देशभर डेंगुका विरामी देखिएका छन् । अझ कृषी मन्त्री चक्रपाणि खनाल नै डेंगुको संक्रमणमा परेपछि झन त्रास फैलिएको छ ।
डेंगुको उपचार नभएकाले संक्रमण हुने वित्तिकै विरामीको मृत्यु हुन्छ भन्ने गलत सन्देश गएको छ । यसले झन आतंकित बनाएको छ । देशका बिभिन्न स्थानबाट डेंगुको कारण मृत्यु भयो भनेर आएका समाचारमा पनि सत्यता छैन ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका प्रमुख कन्सलटेन्ट डा. अनुप बास्तोला भन्छन्, ‘ डोटीमा डेंगुबाट एकजनाको मृत्यु भयो भन्ने खबर आयो । मैले उनको फाइल मगाएर हेरें । उनलाई डेंगु मात्र थिएन, स्क्रव टाइफस पनि पोजेटिभ थियो । विरामीको मृत्यु अन्य कारणले पनि भएको हुनसक्छ वा भनौ धेरै रोगको संक्रमण एकैपटक भएको हुनसक्छ । डेंगुले विरामीको ज्यान लिंदैन तर केही दुःख दिन्छ । यसबाट डराउनु पर्दैन । ’
डेंगुका बारेमा थुप्रै भ्रमहरु फैलिएकाले समाज आतंकित भएको डा. बास्तोलको भनाइ छ । यो एडिस एजिप्टइ र एडिस एल्वौपेक्टस जातको लामखुट्टेले टोकेर सर्ने गर्दछ । संक्रमित लामखुट्टेले टोकेपछि यो मानिसमा सर्ने हो । खासगरी यो लामखुट्टेले साँझबिहान टोक्छ । डेंगु हुने वित्तिकै मानिसहरु आत्तिन थालेका छन् । यो सामान्य ज्वरो हो । दश हजार मानिसलाई संक्रमितले टोकेमा एक हजार जनामा मात्र लक्षण देखिन्छ । बाँकी ९ हजारलार्इै केही हुँदैन । त्यो हजार मध्ये ५ सयमा सामान्य लक्षण देखिन्छन् भने बाँकी पाँच सयमा ज्वरोसहित केही समस्या देखिन्छ । यो आत्तिने अवस्था होइन ।
यो रोग सार्ने लामखुट्टे ग्रामीण क्षेत्रभन्दा शहरी क्षेत्रमा बढी पाइने गर्दछ । यसले स–साना सफा पानी जमेको स्थानमा फुल पार्ने गर्दछ । खास गरी वर्षाको पानी जम्ने टीनका डब्बाहरू, रंगका खाली डब्बा, थोत्रो टायर, अलकत्रा वा मट्टितेलका खाली ड्रमहरू, फुलदानी, गमला, पानीका ट्ंयाकी आदिमा यस्ले फुल पार्दछ । सहरी क्षेत्रमा यस्ता वस्तुहरू पर्याप्तमात्रामा हुने भएकाले पनि यो लामखुट्टे सहरमा बढी देखिन्छ ।
यो भाइरस डेंगु १, डेंगु २, डेंगु ३ र डेंगु ४ गरी चार प्रकारका हुन्छन । एडिज लामखट्टे कालो रंगको हुन्छ, जसमा सेतो थोप्लो पनि देखिन्छ । यो लामखुट्टेले विशेषगरी दिउँसो टोक्ने गर्दछ । औलो उत्पन्न गर्ने लामुखट्टे फोहोर पानीमा पाइने भए पनि डेंगु सार्ने लामखुट्टेले थुप्रै दिनदेखि हलचल नभएको स्वच्छ पानीमा फुल पार्छ ।
डेंगु रोग क्लासिक डेंगु, हेमोरेजिक र साक सिन्ड्रोमगरी तिन प्रकारका छन । क्लासिक डेंगु सामान्य प्रकारको डेंगु हो । यो आफंै निको हुन्छ, मृत्युको सम्भावना कम हुन्छ । तर यदि कुनै व्यक्तिलाई डेंगु हेमोरेजिक ज्वरो वा डेंगु साक सिन्ड्रोम भएको छ भने यसको उचित प्रकारले उपचार नगरे मृत्यु समेत हुनसक्छ ।
डा. बास्तोला भन्छन्,‘ डेंगुको उपचार लक्षण अनुसार गरिन्छ । ज्वरो घटाउन सिटामोल खानुकासाथै प्रशस्त झोल पदार्थ पिउनु पर्दछ । एस्पीरीन तथा आईबुप्रोफेन भने खान हुँदैन । डेंग ज्वरो विरुद्धको खोप तथा खास उपचार समेत नभएको हुँदा लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु नै यस रोगको बचावटको मुख्य उपाय हो ।’
डेंगु ज्वरोको मुख्य लक्षण भनेको एक्कासी उच्च ज्वरो आउनु हो । यो ज्वरो ५ देखि ७ दिनसम्म रहन सक्छ । ज्वरोकासाथै असाध्यै टाउको दुख्ने, आँखाको गेडी तथा आँखाको पछिल्लो भाग दुख्ने, ढाड, जोर्नी तथा मांसापेशिहरू दुख्ने, शरीरमा विमिरा आउने, वाकवाकी लाग्ने, पेट दुख्ने, नाक वा गिजाबाट रगत बग्ने आदि हुन्छ । कतिपय अवस्थामा रक्तश्राव हुने वा शरीरमा रगत जमेको दागहरू देखापर्ने, बेहोश हुने आदि लक्षणहरू पनि देखा पर्न सक्छ ।
‘मुख्यतः डेंगु ज्वरोबाट बच्न लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नुका साथै लामखुट्टेको वृद्धि रोक्नु पर्छ पानी जम्न सक्ने भाँडाहरू जस्तै गमला, फुलदान, खाली बट्टा, अलकत्रा वा मट्टितेलका खाली ड्रमहरू, गाडीका काम नलाग्ने टायरहरू आदिमा पानी जम्न दिनु हुँदैन । पानीको ट्याङ्किलाई लामखुट्टे प्रवेश गर्न नदिने गरि छोपेर राख्ने । कुलरमा रहेको पानीमा प्रत्येक हप्ता एक दुई चम्चा मट्टितेल हालिदिने साथै जम्मा भएको पानी सफा गर्ने । फुलदानिमा रहेको पानी हप्तामा दुई पटक फेर्ने । यसको लामखुट्टेले दिउँसो टोक्ने हुँदा दिउँसो बस्दा बाहुला भएको वा शरीर ढाकिने लुगा लगाउनुपर्छ । ’ डा. बास्तोल बताउँछन् ।